Eran’ny vahoaka hoe? • AoRaha
Eran’ny vahoaka hoe?
Ny fifidianana andraisan’ny vahoaka ampy taona sy tsy very zo anjara ihany no fomba iray voarakitry ny lalàna fa hakàna ny hevitr’izy ireo na hierana amin’izy ireo satria indramina any aminy fahefana. Fahefana, izany hoe fanomezana alalana ireo olom-boafidy hisolo tena azy amin’ny lafin-javatra samihafa, ka anisan’izany ny fampiharana ny lalàna. Mahatalanjona fatratra ankehitriny ny fiandrasana ny vahoaka ho tonga saina na hahatsapa tena manoloana ny ady amin’ny valanaretina Covid-19. Nahoana no atao miendrika fierana aminy ny hiverenana indray amin’ny fihibohana na tsia? Tsy manana ny antom-pisiany ny didy amandalàna raha vahoaka hendry no nameno an’izao tontolo izao. Ny hifehy ny vahoaka mba tsy hihoa-pefy no nifidianana olona isan’ambaratongany, manomboka eny amin’ny fokontany ka hatrany amin’ny Filohan’ny Repoblika. Rariny raha ireny fitangorongoronana mampatahotra ireny no hita tamin’ny sary niparitaka nandritra ny faran’ny herinandro nankalazana ny Paska farany teo. Sa ve sanatria hatosika an-kolaka hanao ny gaboraraka izy ireo mba hanaporofoana ny fandraisana fanapahankevitra ho mafy amin’ ny lafiny ara-tsosialy sy ara-toekarena amin’ ny ankamaroan’ny Malagasy ao aoriana kely ao?
Miainga any amin’ny mpitondra ny fijoroana sy fisehoana ho olona tompon’andraikitra, arakaraka ny toerana tazoniny sy ny fahefana ananany. Io fanaraha-maso sy fampiharana ny fampanajana ny didy aman-dalàna amin’ny olon-drehetra io ihany no efa lesoka be tamin’ny ady tamin’ny valanaretina, tamin’ny taondasa. Mety tsy ho tonga amin’izao dingana ampihorohoroan’ny Covid-19 amin’ilay endriny niova avy atsy Afrika Atsimo izao aza isika, raha tena hentitra sy mendrika tamin’ny fampanarahandalàna ireo manam-pahefana isan’ambaratongany. Firenena nikatona tamin’ny fivezivezen’ny olona avy any ivelany isika, ankoatra ny tany Nosy-Be, koa nahoana no tsy voafehy ny fidiran’ ity Covid-19 ity? Moa ny vahoaka ihany ve no tompon’antoka amin’ny toe-draharaha ara-pahasalamana ankehitriny?
Tsy fotoanan’ny fifanomezan-tsiny izao nefa fotoana hanaovana antso avo amin’ny fitakiana ny tena fandraisana andraikitra miainga avy any amin’ny fara-tampony amin’ny fitantanana ny firenena. Aza omena irika mety hanaotaovany foana ny vahoaka. Ilain’ny firenena sahirana toa an’i Madagasikara foana ny fanamafisana ny fiambenana sy fanaraha-maso ny fihetsiky ny tsirairay, raha tiana tokoa ny hifehy na handresy ny Covid-19. Fantatra fa hahasoa azy ny fampiharana an’ireo fepetra samihafa napetraka ka aza ierana aminy intsony. Eran’ny mpitondra izany fa tsy eran’ny vahoaka…